MOHAMED RASHID -RAYAALE STRATEGY : WEAK AND PATHETIC | Toggaherer's Blog
« DALKA HA LAGA BADBAADIYO DALLADA GUUD
KU DHAQANKA SHAREECADA ISLAAMKU WAA WAAJIB QOFKASTA SAARAN IN UU NAFTIISA KA BILAABO!! »
MOHAMED RASHID -RAYAALE STRATEGY : WEAK AND PATHETIC
Mohamad Rashid-Rayaale strategy: Weak and Pathetic.
“NO WAY, NO HOW, NO WARAABE-RASHIID, NO RAYAALE”
Shaqsi ahaan waan kuugu hambalyaynayaa musharaxnimada aad aamintay inaad hoos tagto Ina Cali Waraabe oo ah gudoomiyaha Ucid. Ticket kiinu waxaan odhan karnaa waxuu ka turjumayaa odhaahda ah : shimbirba shimbirkiisuu la duulaa. Aqooneey bi’i waa!!
Maadaamood is keentay madasha siyaasda waxaa khasab ah inaan fikir kayga ka dhibto musharaxnimadaada. Taasi waxay keenaysaa in dib loo jeleeco doorkii iyo halkii aad ka taagnayd siyaasada gobolka Awdal oo aad rabto inaad codkiisa heshid si aad guul ugu keento xisbiga Ucid. Ku soo dhawow xisaabi xil male!
Waxaad ka mid tahay dadkii Awdal wax u bartay ee dadka iyo gobolkuba ku xisaabtamayeen gaar ahaan wakhtiyadii siyaasadu cakirnayd. Waxaan la soconaa inaad mar ka mid ahayd xisbigii SDA oo ka mid ahaa ururadii ugu horeeyay ee ka hor yimaad taliskii Maxamad Syad Barreh. Ururkaa oo uu ka madax ahaa Alle ha u naxariiste Maxamad Farah Abdillahi ( Xanshare).
Taariikhdu waxay xusaysaa inaad ka mid ahayd raggii ugu horeeyay ee mijo xaabiyay ururkaa adigoo ay ku hagayeen danno gaar ah oon ka fogayn inaad wax ka noqoto taliskii Syad Barre. Taana waxaa ka markhaati kacaya adigoon maalin qudha taageerin go’aanadii SDA kaga soo hor jeeday dawladaii dhacday, halka Xanshare iyo Idiris Xasan Diiriye si badheedha maalin walba u weerarayeen taliskii milatariga ahaa. Wakhtigii dagaalada sokeeye Awdal lagu hayay waxaad ka mid ahayd ragii aamus talo mooday.Waxaad ka mid ahayd raggii qalinkooga hagraday, waxaad doorbiday inaad SDA kala qaybiso halkaad ka xoojin lahayd eed dadkaagu ugu adeegi lahayd. Sida garaadku ina siinayana marka dadkaagu halis ku jiraan aamusku wuxuu la mid yahay khiyaamo. Xasuuso aamuskaagii dhacdadii 04 february 1991 halkay Xanshare iyo Idiris Xasan dadkooga la qaybsadeen xanuunka iyagoo albaab walba garaacay sidii ummadoodu ula jaanqaadi lahayd asaageed (Ref : Interviews BBC somali). Waxaad adigu wakhtigaa doorbiday in SNM la hoos tago. Rag wuxuu kala baxaa maalinta balaayo, adigu waxaad ka mid tahay inta codkooga la waayo maalintaa balaayo.
Ka dib markaad mijo xaabisay SDA, waxaad ku soo laabatay Waqooyiga and Boorame (a coward returning to the scene of the crime?) adigoo somaliland u galay sidaad wax uga noqon lahayd. Waxad ka mid ahayd ragii sida kala hadhka lahay u taageersanaa in tiiyoon la xisaabtamin SNM laysku dhiibo. Waxaad ka mid ahayd intii karaamaysay kii ugu taariikh xumaa Awdal ee silicii ummadiisa saldanad ku gaadhay.
Waxaad ka mid tahay in badan oo qabta in reer Awdal taariikhda dib u eegin. Nassib wanaag waa fakir khaldan waayo nin kastaa halkuu taariikhda iska taagay aagaan aan duugoobin iyay ku kaydsan yihiin.
Diiwaanka taariikhdu ma reebin wax aad u qabatay Awdal. Intaad Soomaliland ku jirtay marna lagaama hayo wax qabad iyo u gargaar danaha Awdal. Dawlada Rayaale waxqabad la’aanteeda dhinaca Awdal maalin qudha wax kamaad odhan. Dhibta dhaqaale, siyaasadeed ee Awdal ku habsatay lama hayo adigoo waligaa ka hadlaya ama ku dhaleecaynaaya dawlada Rayaale. Awood qaybsiga siyaasadeed ee Awdal lagu dulmay kuma jirtid inta weerartay balse waxaad ka mid tahay inta aaminsan in reer Awdal la miisaan yihiin saamiga xaaraanta ah ee ay ka haystaan somaliland.Waxay Awdal qabtaa inaad ka mid tahay tiirarka u waaweyn ee maamulka ina Rayaale ku tiirsantahay.
Sidaa darteed, waxaa cad in musharaxnimadaadu tahay mid calaamada su’aaslo badani dul saran yihiin. Waxaa is weydiin leh waxa kugu kalifay inaad Rayaale ka hor timaad markay doorasho halis ku haysaa soo food saartay. Waxay Awdal is waydiinaysaa wakhtiga aad is badishay. Waxay Awdal is waydiinaysaa waxaad wado, sobobtoo ah wali lagaama hayo in dhibta Awdal haysataa adiga dhib kugu hayso. Waxay Awdal is waydiinaysaa waxaad mar kale cay ugu soo hoysay aqoonta Awdal. Waxaad ka mid tahay intaan wali soo celin deyntii Awdal iyo dadkeegu ku lahaayeen. Adoon wali deyn lagugu leeyahay oo sheegin sidaad u bixinayso amba waxaad u bixin wayday, iyaad waliba ku dhiiratay in codka ummada aad heshin. Is maad waydiin in ummadu kula han tahay iyo inay hankaaga mid ka saraysa leedahay. Ummadu way kaa hami waytahay waxayna cay u aragtaa han yaridaada siyaasadeed adigoo magacooga isticmaalaaya.
Markaan dhinac walba ka eegno musharaxnimadaada iyo ulajeedadeeda waxaan ka gayn waynay inay tahay mid mugdi badan saran yahay sidii taariikhdaada siyaasadeed ka markhaati kacayso. Dadka reer Awdal gaar ahaan inta aad isku faca tihiin ee aqoonta kuu lihi waxay isla helayaa fikir xaqiiqada u dhow. Waxaa cad in musharaxnimadaada uu ka dambeeyo Daahir Rayaale, waxayna ula jeedadeedu tahay sidii loo baahin lahaa mucaaridka reer Awdal ee goostay inay Rayaale kursiga ka tuuraan si Kulmiye u soo baxo. Gaar ahaan arintan musharaxnimadaadu waxay yoolka saaraysaa inay Beesha Habar-Cafaan laga weeciyo inay u codayso Kulmiye maadaamow cadahay in Awdal ay u janjeedho dhinaca Habar Cafaan raacdo maadaamow Maxad-Case shaaciyeen inay Kulmiye ku kalsoon yihiiin. Xisaab qoto dheer uma baahna in la fahmi karo ula jeeda Rayaale ka leeyahay inuu maalgaliyo musharaxnimadaada.
Arintaas waxaa markhaati looga dhigayaa xidhdhka fiican ee ilaa manta idinka dhexeeya Rayaale taas oo keentay waliba in Rayaale, waa sida illo badani sheegayaane, dusha u ritay wixii kharash ah ee hawshu keento, gaar ahaan socdaalkaga dibadaha. Waliba waxaa arintaas sii xaqiijinaaya, sida ay sheegayaan ilo madax banaan oo reer Awdal ihi, inaanad dhaqan u lahayn inaad ka soo hor jeesato dhinaca mucaarad dhab ah. Waxaa la cadaynayaa, in Rayaale iyo adiga axdi inii yaal kaas oo ah in la wiiqo miisanka siyaasadeed ee Habar-Cafaan, dabadeedna adigu aad dhaxasho kursiga wasiirnimo ( wasiir u yaalka) ee Buuni sharafta moodaayo.
Isku soo wada xooriyoo, Maxamad Rashiidow, talaabadaadu waa mid aan sina ugu cuntamay Awdal iyo Habar-Cafaan toona. Waxaan kuu sheegayaa Habar- Cafaan inay leedahay hogaamo siyaasadeed oo fahmi kara qorsheyaasha dhabar jabinta ah ee ku beegan Beesha. Beeshu dhibaato badan iyay soo martay, dhib xad leh iyay tabanaysaa, dhibaatooyinkaana waxaad ka mid ahayd raggii ansixiyay waayo aamuskaagu waxba kama duwanayn u qushuucid dhibta dadka haysata. When Habar Cafaan asked for help, you was too weak to stand up. Dadnimada qofka waxaa lagu qiimeeyaa halkuu iska taago arimada xasaasiga ah marka ay ummadi marayso marxaladdo adag. Maanta oo ah maalinti ummadu aarsan lahaydna waxaad talo mooday inaad markale bohol ku ridid karaamada beesha. Ma waxaad ku talo gashay inaad dadka mar walba khayaamayn kartaan. No way.
Mida kale waxaa waliba Beesha ceeb ku ah ina Cali Wareeba oon mowqifkiisa naqaano iyo qiimahiisa inaad adigoo Dr ah daba fadhiisato. Taas iyaa si fiican u muujinaysa miisaankaaga iyo hankaaga. Musharaxnimadaadu iyo shirqoolka ina Rayaale waxay meel ka dhac ku yihiin karaamada iyo sharafta Awdal iyo ummada gobolka Talaabadaa aad isla hesheen adiga iyo Rayaale waa mid muujinaysa heerka aad ka taagantihiin danaha guud ee reer Awdal iyo kuwa u gaarka ah Habar-Cafaan. Your strategy is weak and pathetic and if you did not invent shamelessness, you have refined it to a level that once seemed impossible.
And the people’s answer is: “NO WAY, NO HOW, NO WARAABE- RASHIID, NO RAYAALE”